Zizonqanyulwa izinhlelo ‘zamaGupta’ kuSABC | News24
Zizonqanyulwa izinhlelo ‘zamaGupta’ kuSABC
Johannesburg – Kubikwa ukuthi ibhodi elisha leSABC selizwakalise okukhulu ukungenami ngesivumelweno esiphakathi kweSABC nephephandaba lamaGupta, iThe New Age (TNA), kubika iThe Huffington Post.
Kulokho okubukeka njengesinyathelo sakamuva seleli bhodi leSABC sokukhuculula le nhlangano yezokusakaza, isivumelwano seSABC esasusa umsindo neThe New Age kanye nesiteshi sezindaba, i-ANN7, naso okungesamaGupta sizonqanyulwa, ngokombiko wephephandaba iBusiness Day ngoLwesibili.
Leli phephandaba lithi lithole ulwazi lokuthi ibhodi lesikhashana leSABC lifuna ukunqamula izivumelwano "ezinobukhoshokhosho" ezenziwa yiSABC, ikakhulukazi iTNA Morning Live Show, nalapho iSABC isakaza bukhoma uhlelo lwesidlo sasekuseni sosomabhizinisi nezikhulu zikahulumeni esisuke sihlelwe yiTNA.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Konke okumele ukwazi nge-Nokia 3310 esiqale ukudayisa kuleli
Umthombo ongathandanga ukudalulwa okhulume neBusiness Day uthi lesi ngesinye sezivumelwano leli bhodi elisha elinganeme ngazo.
“Akusikho kuphela ukuthi inkontileka ayiqondile, kodwa akuwenzi umqondo wezezimali ukuthi iSABC ihlale esivumelwaneni nesiteshi esiyizimbangi,” umthombo kubikwa ukuthi usho kanjalo.
Ngokombiko weBusiness Day, ikomiti lasePhalamende eliphenya ngeSABC ngaphambilini lezwa ukuthi iSABC ikhokhe imali engafinyelela ku-R1 million ngesiqephu ngasinye seTNA Morning Live Show. Kubika ukuthi lokhu kwadalulwa olwazini olwanikwa ikomiti yilowo owayeyisikhulu esiphezulu kwaSABC, uPhil Molefe.
Leli komiti laphinde lezwa ngalowo owayeyi-Contributing Editor, uVuyo Mvoko, nowachaza ukuthi iSABC iyona ethwala zonke izindleko zokudidiyela uhlelo ekubeni inzuzo eyenziwayo yonke iya kuTNA, iBusiness Day ibike kanjalo.